သင်ဖုန်းကိုင်တဲ့ပုံစံကို ရွေးကြည့်ပါ… – Trend.com.mm
လေ့လာချက်တွေအရ စမတ်ဖုန်းကိုင်တဲ့ပုံစံကနေ သင်ဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်။သင့်အကြောင်းကဘယ်လိုဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေကိုခန့်မှန်းနိုင်ပါသတဲ့။ခန့်မှန်းချက်အဖြေဖြစ်တဲ့အတွက် တူညီတာတွေရှိနိုင်သလို မတူညီနိုင်တာတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဒီလိုမျိုးတွေလိုက်ဖတ်ရတာ
စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့် ကိုယ်ဖုန်းကိုင်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရဲ့လား ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး
တကယ်လို့သင်ဟာ ဖုန်းကို အမြဲလက်တစ်ဖက်တည်းကိုင်ပြီး စာရိုက်တယ်၊ပိုစ့်တွေကြည့်တယ်။ဂဏန်းတွေနှိပ်တယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်
ယုံကြည်မှုပြင်းထန်တဲ့သူမျိုးဖြစ်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အချစ်ရေးမှာတော့ နည်းနည်းပြောင်းပြန်ပါ။သင်က အချစ်ရေးတစ်ခုကိုမစခင်
သင့်ဘ၀မှာ ဒီလူကို တကယ်လိုအပ်ရဲ့လားဆိုတာမျိုး တွေးတောချိန်ဆတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတွေက သင့်ကိုအထီးကျန်တဲ့သူ
*လက်တစ်ဖက်က ဖုန်းကိုင်ထားပြီး တစ်ခြားလက်တစ်ဖက်က လက်မနဲ့ စကရင်မ်ကို အသုံးပြုတယ်
ဒီလိုပုံစံနဲ့ဖုန်းကိုင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါက သင့်ရဲ့ ဥာဏ်ကောင်းမှုကိုဖော်ပြနေပါတယ်။သင်က ဥာဏ်ကောင်းတယ်။အကျိုးအကြောင်း
စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ကိစ္စတစ်ခုကိုမလုပ်ခင် စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပြီး အမြဲတမ်းစဉ်းစားတွေးတောနေတဲ့အတွက် သင်ဟာ အလိမ်
ခံရဖို့ မလွယ်ကူတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အချစ်ရေးမှာတော့ နည်းနည်းမစွံပါဘူး။အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်သင်ကဆုံးဖြတ်ချက်မြန်သလို
မလိုအပ်တဲ့အတွေးတွေလည်းစဉ်းစားမိသူတစ်ယောက်ပါ။ဒါက သင့်အချစ်ရေးကို အနည်းငယ်အခက်အခဲဖြစ်စေပါတယ်။
ဖုန်းကိုလက်နှစ်ဖက်လုံးနဲ့ကိုင်တယ်။လက်နှစ်ဖက်လုံး က ဖုန်းပေါ်မှာပြေးလွှားလှုပ်ရှားနေတတ်တယ်ဆိုရင် ဒါက သင်ဟာ လျင်မြန်ဖျတ်လတ်တယ်။
ဘာမဆို အခုချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှကြိုက်တဲ့သူတစ်ယောက်လို့ဖော်ပြနေပါတယ်။ဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မဆို လိုက်လျောညီထွေနေတတ်ပြီး
အခြေအနေအသစ်တွေကြုံလာရင်လည်း အကျိုးရှိရှိပြုမူဆောင်ရွက်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ သင်က ဘယ်အရာမဆို ချက်ကျလက်ကျနဲ့ ပြောတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခါတစ်လေဆို သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်နဲ့တောင် အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အချစ်ရေးမှာတော့ အနည်းငယ်အလျော့အတင်းလေးတွေရှိသင့်ပါတယ်နော်။
*လက်တစ်ဖက်ကဖုန်းကိုင်ပြီး ကျန်လက်တစ်ဖက်က လက်ညိုးကိုသုံးတယ်
ဒီလိုဖုန်းကိုင်တဲ့ပုံစံဆိုရင်တော့ သင်က တီထွင်ဖန်တီးဥာဏ်၊ဖြတ်ထိုးဥာဏ်ကောင်းတယ်လို့ဖော်ပြနေတာပါ။သင်က ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်
တစ်ယောက်တည်းနေရတာကြိုက်ပြီး အားလုံးအံ့သြရတဲ့အရာတစ်ခုကို ဖန်တီးချပြချင်သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် ပန်းချီဆွဲတာ၊စာအုပ်
ဖတ်တာစတဲ့အနုပညာအလုပ်တွေမှာ သင်က ပိုပြီးအောင်မြင်မှုရလေ့ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။အချစ်ရေးမှာတော့ သင်က ခံစားချက်ကို ဖော်ပြရမှာရှက်သူတစ်ယောက်
ပါတဲ့။တကယ်လို့သင့်ခံစားချက်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားမယ်ဆိုရင် တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကိုပိုပြီးကောင်းကောင်းသိလာမယ့်အခွင့်အရေး၊သင့်ကိုပိုပြီး
လေးစားအားကျလာမယ့်အခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာပါပဲ။တစ်ခါတစ်လေကိုယ့်ခံစားချက်တွေကို ဖော်ပြတာက အချစ်ရေးကိုပိုပြီးသာယာပျော်ရွှင်စေပါတယ်။
ကဲ ဘယ်လိုလဲ ကျွန်တော်ပြောပြတာတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်ရဲ့လား?
လလေ့ာခကျြတှအေရ စမတျဖုနျးကိုငျတဲ့ပုံစံကနေ သငျဟာ ဘယျလိုလူမြိုးဖွဈတယျ။သငျ့အကွောငျးကဘယျလိုဘယျဝါဖွဈတယျဆိုတဲ့ ကိုယျရညျကိုယျသှေးတှကေိုခနျ့မှနျးနိုငျပါသတဲ့။ခနျ့မှနျးခကျြအဖွဖွေဈတဲ့အတှကျ တူညီတာတှရှေိနိုငျသလို မတူညီနိုငျတာတှလေညျးရှိနိုငျပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ဒီလိုမြိုးတှလေိုကျဖတျရတာ
စိတျဝငျစားဖို့တော့ကောငျးတယျမဟုတျလား။ဒါကွောငျ့ ကိုယျဖုနျးကိုငျတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ ကိုယျ့အကွောငျးတိုကျဆိုငျရဲ့လား ဖတျကွညျ့လိုကျပါဦး
တကယျလို့သငျဟာ ဖုနျးကို အမွဲလကျတဈဖကျတညျးကိုငျပွီး စာရိုကျတယျ၊ပိုဈ့တှကွေညျ့တယျ။ဂဏနျးတှနှေိပျတယျဆိုရငျ သငျဟာ ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျ
ယုံကွညျမှုပွငျးထနျတဲ့သူမြိုးဖွဈတယျလို့ယူဆရပါတယျ။ဒါပမေဲ့ အခဈြရေးမှာတော့ နညျးနညျးပွောငျးပွနျပါ။သငျက အခဈြရေးတဈခုကိုမစခငျ
သငျ့ဘဝမှာ ဒီလူကို တကယျလိုအပျရဲ့လားဆိုတာမြိုး တှေးတောခြိနျဆတတျသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ဒါကွောငျ့လူတှကေ သငျ့ကိုအထီးကနျြတဲ့သူ
*လကျတဈဖကျက ဖုနျးကိုငျထားပွီး တဈခွားလကျတဈဖကျက လကျမနဲ့ စကရငျမျကို အသုံးပွုတယျ
ဒီလိုပုံစံနဲ့ဖုနျးကိုငျထားတယျဆိုရငျတော့ ဒါက သငျ့ရဲ့ဉာဏျကောငျးမှုကိုဖျောပွနပေါတယျ။သငျက ဉာဏျကောငျးတယျ။အကြိုးအကွောငျး
စဉျးစားဆငျခွငျတတျတဲ့သူတဈယောကျပါ။ကိစ်စတဈခုကိုမလုပျခငျ စမျးသပျလုပျဆောငျလရှေိ့ပွီး အမွဲတမျးစဉျးစားတှေးတောနတေဲ့အတှကျ သငျဟာ အလိမျ
ခံရဖို့ မလှယျကူတဲ့သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ဒါပမေဲ့ အခဈြရေးမှာတော့ နညျးနညျးမစှံပါဘူး။အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျလာရငျသငျကဆုံးဖွတျခကျြမွနျသလို
မလိုအပျတဲ့အတှေးတှလေညျးစဉျးစားမိသူတဈယောကျပါ။ဒါက သငျ့အခဈြရေးကို အနညျးငယျအခကျအခဲဖွဈစပေါတယျ။
ဖုနျးကိုလကျနှဈဖကျလုံးနဲ့ကိုငျတယျ။လကျနှဈဖကျလုံး က ဖုနျးပျေါမှာပွေးလှားလှုပျရှားနတေတျတယျဆိုရငျ ဒါက သငျဟာ လငျြမွနျဖတျြလတျတယျ။
ဘာမဆို အခုခကျြခငျြးဆုံးဖွတျခကျြခရြမှကွိုကျတဲ့သူတဈယောကျလို့ဖျောပွနပေါတယျ။ဘယျလိုပတျဝနျးကငျြနဲ့မဆို လိုကျလြောညီထှနေတေတျပွီး
အခွအေနအေသဈတှကွေုံလာရငျလညျး အကြိုးရှိရှိပွုမူဆောငျရှကျတတျတယျ။ဒါပမေဲ့ သငျက ဘယျအရာမဆို ခကျြကလြကျကနြဲ့ ပွောတတျတဲ့အတှကျကွောငျ့တဈခါတဈလဆေို သငျ့ရဲ့လကျတှဲဖျောနဲ့တောငျ အဆငျမပွဖွေဈတတျပါတယျ။အခဈြရေးမှာတော့ အနညျးငယျအလြော့အတငျးလေးတှရှေိသငျ့ပါတယျနျော။
*လကျတဈဖကျကဖုနျးကိုငျပွီး ကနျြလကျတဈဖကျက လကျညိုးကိုသုံးတယျ
ဒီလိုဖုနျးကိုငျတဲ့ပုံစံဆိုရငျတော့ သငျက တီထှငျဖနျတီးဉာဏျ၊ဖွတျထိုးဉာဏျကောငျးတယျလို့ဖျောပွနတောပါ။သငျက ကိုယျ့အတှေးနဲ့ကိုယျ
တဈယောကျတညျးနရေတာကွိုကျပွီး အားလုံးအံ့သွရတဲ့အရာတဈခုကို ဖနျတီးခပြွခငျြသူတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။အထူးသဖွငျ့ ပနျးခြီဆှဲတာ၊စာအုပျ
ဖတျတာစတဲ့အနုပညာအလုပျတှမှော သငျက ပိုပွီးအောငျမွငျမှုရလရှေိ့သူဖွဈပါတယျ။အခဈြရေးမှာတော့ သငျက ခံစားခကျြကို ဖျောပွရမှာရှကျသူတဈယောကျ
ပါတဲ့။တကယျလို့သငျ့ခံစားခကျြတှကေိုဖုံးကှယျထားမယျဆိုရငျ တဈယောကျယောကျက သငျ့ကိုပိုပွီးကောငျးကောငျးသိလာမယျ့အခှငျ့အရေး၊သငျ့ကိုပိုပွီး
လေးစားအားကလြာမယျ့အခှငျ့အရေးကိုဆုံးရှုံးလိုကျရတာပါပဲ။တဈခါတဈလကေိုယျ့ခံစားခကျြတှကေို ဖျောပွတာက အခဈြရေးကိုပိုပွီးသာယာပြျောရှငျစပေါတယျ။
ကဲ ဘယျလိုလဲ ကြှနျတျောပွောပွတာတှနေဲ့ တိုကျဆိုငျရဲ့လား?
The Kissing Booth2ထွက်လာဦးမယ်ဆိုရင် ယူတို့ပျော်ကြမှာလား?